SOG Voice ကို
သုတေသန & ဆန်းသစ်တီထွင်မှု
Market က Sevice
သံမဏိ multistage centrifugal စုပ်စက်များအတွက်တပ်ဆင်ခမှတ်စု
သံမဏိ Multistage centrifugal Pump များအတွက်တပ်ဆင်ခြင်းမှတ်စုများ: အသံမဏိ multistage centrifugal စုပ်စက်တပ်ဆင်မှုနည်းပညာ မှစ. 1. သည်စုတ်ယူခြင်းပိုက်တစ်တင်းကျပ်သောတံဆိပျကိုအခွအေနေရန်လိုအပ်သည်, ပိုက်ယိုစိမ့်သို့မဟုတ်ယိုစိမ့်ရှိသည်မဟုတ်နိုင်, မဟုတ်ရင်ကရေဈမှာလေဟာနယ်ဒီဂရီဖျက်ဆီးမည် ...
အဆိုပါ centrifugal စုပ်စက်စမ်းသပ်လမ်းဘာတွေလဲ?
18-06-28 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
အများအားဖြင့်က The centrifugal Pump စမ်းသပ်ခြင်းအမျိုးအစားစမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်စက်ရုံစမ်းသပ် Include: အဆိုပါ centrifugal စုပ်စက်စမ်းသပ်─ type ကိုစမ်းသပ်ခြင်းအမျိုးအစားစမ်းသပ်မှုများပါဝင်သည်: စမ်းသပ်လည်ပတ်နေသည့်အခါစစ်ဆေးသင့်, အဆိုပါအပြေးစမ်းသပ်: စသည်တို့ကိုစမ်းသပ်မှု, စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုနှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောစမ်းသပ်မှုများနှင့်ဆူညံသံတုန်ခါမှုစမ်းသပ်မှု, တစ်ဦးကအပြေး စုပ်စက်၏အပူချိန်ကိုမြင့်တက် ...
centrifugal စုပ်စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းသို့ကွဲပြားလျက်, တိကျတဲ့အကြောင်းအရာပါဝင်ကြမည်နည်း
centrifugal စုပ်စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းသို့ကွဲပြားလျက်, တိကျတဲ့အကြောင်းအရာပါဝင်ကြမည်နည်း centrifugal စုပ်စက်အဆင့် 1 ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအကြောင်းအရာများကိုအောက်ပါအတိုင်း: 1) ဘက်မလိုက်ဂလင်း, ထုပ်ပိုးမတိုဘူးကြောင်းသေချာစေရန်စစ်ဆေးမရှိ wear နဲ့ယိုစိမ့်စူပါကော်လာရှိ၏ 2) ရှိ, မရှိစစ်ဆေး ...
"သင်အောက်ပါအချက်များမဆိုငျတှေ့ခဲ့လျှင်စုပ်စက်ကိုရပ်တန့်သင့်တယ်" (1) ဘုံဘိုင်ရေယိုစိမ့်ရှိသည် ဖြစ်. , (2) လာတဲ့အခါစုပ်စက်မီးခိုးသို့မဟုတ်ဖမ်းမိမီးမော်တာ; (3) Pump ပုံမှန်မဟုတ်သောအသံသည်ရှိသည် ဖြစ်. , (4) ဘယ်အချိန်မှာဝံအပူချိန်များလွန်းလျင်မြန်စွာထသို့မဟုတ်သောက်; (5) ကိုစုပ်စက်အားကောင်းတဲ့တုန်ခါမှုရှိသောအခါ,